Mashaariicda Wadanka ee La Soo dhaafay - Helitaanka Kaalmo Siman
Mashaariicda Wadanka ee La Soo Dhaafay
Ujeedada EAI ayaa ah in lahaanshaha joogitaan waara laga helo wadan lana mideeyo barnaamijyada dhamaan aagaga saameynta ku leh. Mararka qaar waaritaanku wuxuu u eg yahay in loo wareejiyo shaqadeena NGO maxalli ah ka dhisan sida arrinta Media One ee Cambodia iyo illaa xad aad u yar oo ka jirta Nepal. Xaaladaha qaarkood, waxaan u xirnaa xafiis dal sababta oo ah xaaladda nabadgelyo ee dalka ka jirta darteed sida ay ahayd xaaladda Yemen iyo xaaladaha kale, EAI waxay waddanka u joogtay mashruuc gaar ah waqtigaasna fursado dheeri ah lama helin. Xaaladaha oo dhan, waxaan hubnaa bulshooyinka aan la shaqeyno, aaladda ay u baahan yihiin si aan u sii wadno shaqada aan aasaasnay. EAI waxay sugeysaa waxayna si firfircoon u raadineysaa fursadaha la-hawlgalayaasha iyo deeq-bixiyeyaasha si loo qiimeeyo saameynta aan ku leenahay tiro ka mid ah kuwan iyo dalal dheeri ah.
U dagaallama xuquuqdaada
Daawo EAI Yaman Yamaniyiin ah oo matalaya sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen wareega ugu dambeeya ee Tartanka Tiyaatarka Dhalinta ee MEPI oo ku taal magaalada Sanca.
Miyiga Hindiya haweenku waxay ku wada koraan caafimaad ahaan
Miyiga Hindiya, dumarka waxaa loo isticmaalaa in lagu daryeelo kuwa kale. Hadda waxay iska caawinayaan midba midka kale inuu diiradda saaro caafimaadkooda.
In loo suuro geliyo jaaliyadaha inay si waara u sii wataan safarkooda isbedelka bulshada.